I-K-Tek Precision Machining ibonelela nge-CNC yokugaya iindawo ezenziwe ngomatshini ngokunyamezelana okuqinileyo. Siye phambili koomatshini bokugaya i-CNC ukusuka kwi-axis eyi-3 ukuya kwi-5 axis. Njenge-ISO9001: 2015 kunye ne-TS 16949: Ngo-2009 inkampani ebhalisiweyo ye-CNC yokuvelisa, asijongi kuphela ekuveliseni kodwa nasekuboneleleni ngomgangatho we-CNC Milling parts.
Nokuba zintsonkothile okanye zinkulu kangakanani iimveliso, iinjineli zethu ezinezakhono ziyakwazi ukuzivelisa ngokuchaneka kunye nomgangatho ofanayo. Yonke into oyilindeleyo kumatshini wokugqibela we-CNC Milling ingenziwa yi-K-Tek Machining Co, Ltd.
Ngokusebenzisa i-CNC Milling Technology yakutshanje, ukuvelisa okuzenzekelayo kakhulu, umahluko unokuhla kwaye ulawulwe kude.
Yintoni CNC Milling?
CNC wekhaya yenye inkqubo machining zixhaphakileyo ukususa izinto. Abasiki bokujikeleza bayimfuneko xa besusa izinto. Umsiki sisixhobo sokusika esinamazinyo abukhali ajikelezayo ngesantya esiphezulu. Izinto eziphathekayo ziya kunqunyulwa xa ukondla i-workpiece kwisitrayi esijikelezayo. Ngamaxesha okusebenza, imilo enqwenelekayo inokwenziwa. Ngokubanzi, umshini wokugaya unee-axis ezintathu: X, Y kunye no-Z. Ukuvelisa iindawo ezintsonkothileyo, i-5-axis, i-6-axis iya kusetyenziswa.
I-K-Tek Precision Machining ngumzi mveliso we-CNC wokugaya. Sinomatshini wokugaya ukusuka kwi-3-axis ukuya kwi-5-axis. Injineli yethu yobungcali usoloko ukufumana isisombululo ukuvelisa iindawo yokugaya entsonkothileyo kwizinga eliphezulu.
• Iimilo: Njengoko iimfuno zabathengi
Ubukhulu beCandelo: 0.5-1300mm
Izinto eziphathekayo: I-Brass, i-Aluminium, i-Alloy steel, i-Stainless steel njl.
• Ukunyamezelana: +/- 0.005mm
• ungenziwa ngemfuneko ngokuzoba okanye iisampulu
• Iibhetshi ezincinane nezinkulu
I-Electroless Nickel (Inc. emnyama)